Billiard lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Aiza no hilalao dobo maimaim-poana? Raha toa ka tsy manana efitra samy hafa izay afaka mametraka ny dobo filomanosana latabatra, ka tsy ilay iray fahafahana hilalao tsy amim-bola – Ity lalao ity Billiards-tserasera. Ny karazana mahazatra indrindra dia ny Amerikana sy ny Rosiana billiards. Samy dikan-dia fitaovana tanteraka ny fitsipika napetraka ao amin'ny lalao rakotra vokatra. Ny fitantanana ihany koa akaiky ny zava-misy, ary afaka mahita ny toerana misy ny baolina na oviana na tsary zoro. Ianao no misy ny kajy ny fihodinan'ny ny famantarana, ny hery ny fiantraikany sy ny jorony, ary ny isa no miseho sy ny mpanohitra ny hevitra.
Dobo filohan'ny Ballard 3d Billiard 8
Dobo filomanosana 8
Fifandonana Pool: 8 Ball Sniffers
Dobo filalaovana: 8 Ball Mania
Dobo Renivohitra 8
Fantsona an-tongotra lavitra
8 Shooter Pool
Bubble amin'ny pisinina
Kapila Pool 1 Player
Shaun the Sheep: pisinina
8 Kintan'ny dobo filomanosana
Fanamby 8 Pool Pool
Billiard misy ranoka
ranomasina187 Billiards 888
Carrom Miaraka amin'ny buddy
Billiard amin'ny portal
Billiard an'i Pop
Lalao Billiards tamin'ny Category:
Farany Billiard lalao
Lalao Online Rehetra Billiard lalao
ato amin'ity fizarana ity dia hifantoka amin'ny billiards – ny lalao izay ny zava-drehetra mitranga eo amin'ny maitso baize latabatra amin'ny paosy, sy ny dingana atao amin'ny alalan'ny baolina sy ny tra.
Aiza mba hitady ny am-boalohany ny snooker?
Izay, ary raha niakatra tamin'ny mahafinaritra ity, dia tsy fantatra, fa manaiky rehetra fa tena antitra. Misy mino fa ny fakany no tokony ho nitady any Shina, ny hafa dia resy lahatra fa ao India. Izany no antony, na dia ankehitriny aza manam-pahaizana tsy mitovy hevitra, billiards nahasarika ny saina foana, foana evolving ary niova, famoronana fomba isan-karazany mba hilalao. Isika ihany koa ny akaiky indrindra dikan ny « Rosiana billiards » ary « Amerikana ». Dia nanomboka hilalao dobo maimaim-poana amin'ny aterineto, ianao dia hianatra bebe kokoa momba ny roa dikan 'ny dingana.
stylish billiards ity lalao
Toy ny lalao rehetra, billiards ampandrenesiny filan'ny nofo. Fa raha manan-tsaina ka antsoina ny olona, ​​raharaham-barotra. Izy no Tsy Nandeha avy ka manome anao fotoana hieritreretana ny hetsika manaraka, mihevitra izay ho vokatr'izany. Tsy hanelingelina resaka kely, sip zava-pisotro, vazivazy. &Nbsp; ny lalao mahavita mitarika ny fahafinaretana fotsiny, fa matetika mpilalao manao vola Betting na voavaha ny billiards loka lehibe. Nandritra ny teny hoe ny raharaham-barotra mety ho nanatsoaka hevitra, mba hanorina fifandraisana sy ny olom-pantany vaovao. Tsy azo hohamaivanina billiards. Izy no hajaina sy homem-boninahitra, ary mihazona fifaninanana ny eo an-toerana sy iraisam-pirenena kilasy. &Nbsp; tsy maintsy miaiky isika fa ny fahafinaretana dia tsy mora vidy, ary tsy ny rehetra manam-bola ho any amin'ny fikambanana na nasiany latabatra fotsiny tao an-tranony. Izany fotsiny tsy ilaina ny mandà tena ny fahafinaretana hitondra baolina, satria isaky ny dobo tsy ampy amin'ny aterineto ny milalao ho maimaim-poana.
Azo fialam-boly sy ny fahafaha ny gameplay
Beautiful sy ny zava-misy simulations atao amin'ny sary 3D aoka hitanao ny latabatra eo ambanin'ny lafiny fijerena hafa sy fanazavana avy any ambony mamirapiratra malefaka fahazavana izay manazava dalana rehetra tany an-tsaha. Manodinkodina ny solosaina fotsiny totozy, dia afaka miala mora foana ny maso ny ny irina fotoana, manenjana ny lamba ny mamantatra ny fitarihan'ny fijery ary manao sary an-tsaina tsipika, nitarika ny hetsika ny baolina. &Nbsp; io ihany sandriny no hanitsy ny hery sy ny fitarihan'ny fiantraikany tra. Dia ampy ny hihazona mandra-mizana hery mampiseho ny fiantraikan'ny zava-dehibe mahatratra ny irina. Ny fomba mahazatra mifehy ny voalohany ihany no mety hahatonga malemy fanahy mahazo aina, fa zatra ny fomba asa ity dia mety ho tena mafy. &Nbsp; mazava ho azy, dia foana ny fahafinaretana hahatsapa ny nitana sampan-drofia malambolambo ambonin'ny famantarana, ny fahombiazana ny rakotra fanaovam-panavotana eo amin'ny latabatra sy ny hamafin'ny ny baolina, fa billiards lalao an-tserasera ianao dia tsy mitaky ny sarany na ny fikambanana karatra.
safidy aterineto dikan 'ny lalao ny billiards
Ho an'ireo izay maniry ny hanandrana traikefa vaovao sy ny isan-karazany ny dingana, billiards aterineto milalao ny tolotra maimaim-poana ny mifangaro, izay miasa ho toy ny singa fanampiny sy Arkanoid tsy maintsy handringana ny vondrona ny baolina. Azonao atao ihany koa mahatsapa ny olana ny lalao eo ambanin'ny rano, izay manova ny leha ny sehatra, ary mahatonga azy ireo ho kamo. &Nbsp; Ny ody faly Management ity mampiseho ny lalao ny billiards ao amin'ny Aquarium. Mbola afaka miditra ao habakabaka sy ny billiards planeta. Nandrava iray hafa, ianao ihany no handresy, nahazo lalao teboka. &Nbsp; Tsy ratsy ady teo ambony latabatra, fanaovana am-paosy baolina ao anaty fiara manomboka manalavitra ny fahamarinana. Ahoana ny hevitrao momba ny mety mba hiaina ny adrenaline billiards nedetskiy nandritra tafahoatra? Teo ambony latabatra ny mahazatra fa tsy nanorim-ponenana baolina fotoana baomba ticking rafitra. Raha tsy te-ho hampihena eo amin'ny dingana, hanaiky mipoaka rafitra ao amin'ny paosy. &Nbsp; Alohan'ny manomboka ny fety lehibe, dia afaka ny mpanofana hahay fiara baolina an-zorony ara-potoana, na amin'ny lafiny efa voafaritra mialoha. Ao amin'io dikan-ny lalao hilalao billiards izany ihany koa tena mahafinaritra sy tsy misy tsy ilaina.
Ny karazana farihy
Amerikantka (maimaim-poana piramida)
Sibirka na Muscovite (Piramida mitambatra)
Anglisy billiards – Snooker
Ny finoa – Kaisa
Amerikana – Poole
Baltika – Novus
Billiards efa ela intsony ho lalao sangany ka lasa malaza eo amin'ny mponina ankapobeny. Izany no mahatonga nisy ary nanjary fantatra be noho ny virtoaly dikan. Te hilalao dobo an-tserasera maimaim-poana isan-andro lasa bebe kokoa. Manana ny tombony rehetra nahafinaritra ny solosaina dika ny tena lalao. Voalohany, dia tsy tokony handeha na aiza na aiza avy tao an-trano, fa ho an'ny olona mihidy, mazava ho azy, dia ny fanapahan-kevitra lafin-javatra. Toy izany koa no azo lazaina ho nahita mpiara-miasa ho amin'ny lalao. Irery eto amin'ity billiards tsy hilalao. Ary ny solosaina – azo atao.
ny mpanohitra dia mety ho toy ny tena mpilalao, ary virtoaly saina. Ary, mazava ho azy, milalao maimaim-poana amin'ny aterineto dobo tsy afaka nandriatra, ary azo antoka fa tsy mividy ny dobo filomanosana latabatra, baolina sy ny fitadiavana fomba hampandraisana. Rehetra dia mila – dia hiverina eo amin'ny solosaina. Ary ianao ho mpikambana avy hatrany ny iray mampientam-po billiard fifaninanana nokarakaraina ho anareo. Maro ny dikan-ny solosaina billiards, izay natao isan-karazany ny mahazatra lalao ary ataovy bebe kokoa mahafinaritra sy mahafinaritra. Ohatra, mba hamoronana tontolo ny sangany billiard trano. Dia eo amin'ny tranonkala sy ny mipoaka billiards sy snooker amin'ny teknolojia 3D, sy ny vahiny dobo, izay raha tokony ho tra asa baolina sy ny fano.
Tsy olana, raha Hianao no mpankafy ny lalao mihitsy, na ny olona izay manangona ny vaovao an-tserasera lalao. Eo ambanin'ny tenifototra dobo amin'ny toerana www. lalao-lalao. fr. ua dia hahita be dia be ny mahaliana sy mampientam-po.